Inja Yezilwanyana - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Inja yezilwanyana [Lycaon pictus]
Inja yasendle egciniweyo ngokupheleleyo. Izinja ezizenzekelayo (iLycaon Pictus) zivela kwinani labantu abaphantsi ngenxa yemimandla emikhulu. I-Wild Dog yenye yezilwanyana ezinobungozi kakhulu zeAfrika. Iinkalo ezahlukeneyo zenza ukuba kubekho isimo esilungileyo sokulondoloza. Igalelo eliyinxalenye yokuncipha kwinani labantu litshutshiso loluntu, kude kube kutshanje kwimihlaba yolondolozo.
Ezinye izinto zifana nezifo ezinjenge-rabies kunye nezidumbu apho i-Wild Dogs zidibene nezilwanyana zasekhaya. Ukuzalisana ingaba yimbangela enokwenzeka ye-Kruger National Park yokuphila iminyaka eyi-6 kuphela.
Le nja ilulungu leentsapho, kwaye ine-750mm emagxeni. Amadoda athulu kakhulu kunamabhinqa kwaye ubunzima yi-20-30 kg njengabantu abadala. Inombala ophuzi obomvu, omnyama nomhlophe. Umntu ngamnye unemodeli yengubo ekhethekileyo, eyenza sikwazi ukubona zonke ezizinja ngokuqinisekileyo.
Inja yasendle iyawandisa imilenze yayo. Izinja zezilwanyana ezinomdla ikakhulukazi kwizilwanyana ezincinci ukuya kumgangatho ophakathi, apho i-Impala yinto ethandwa ngumdla. EMpuma Afrika baye babhalwa ukuzingela intshontsho enkulu njenge-Wildebeest neZebra. Izinja zasendle zizingela kwiipakethi, kwaye bonke abantu babambisana kwiqela lokuzama ukugxotha nokugqithisa ixhoba lokuxhalabisa.
Emva kokufakwe kwimiba, ixhoba libulawa zizo zonke izinja eziqhekezayo. Izinja zezilwanyana zithatha imfuyo kwezinye iindawo, kodwa oku kuyinto engaqhelekanga. Ngaphakathi naseMasai Mara National Reserve, eKenya, ii Wild Dogs aziyihoyi imfuyo, kwaye kwimeko enye eZimbabwe yayidlula kwi-caldock yamathole ukuba ichole iKudu kwi-paddock engumakhelwane.
Ukuvalela kweenja zasendle. Izinja ezizenzekelayo zizalis wonke unyaka. Emazantsi Afrika amantshontsho azalwa phakathi nobusika emva kwexesha lokunyuka kweentsuku eziyi-70. Eyaziwayo njengombhangqwana we-alpha, indoda eyindoda kunye nebhinqa zezona zinja kuphela eziza kuzaliswa nezinye izinja. Amanye amalungu ayenayo ilungelo lokuzala kwaye asebenze nje njengabancedisi.
Njengamantshontsho amakhulu ayi-12 okanye ngaphezulu azalwa, ibhinqa alikwazi ukuyinyula inzala ixesha elide. Ukususela kwiminyaka emithathu yeeveki, amantshontsho akhuselekile kwimibhobho.
Inja yasendle idla ngesidumbu. Iipakisha ziyakwazi ukuhluka ngobukhulu, ukusuka kwiqela elilodwa kunye nabantwana babo, ukuya kwezininzi eziyi-50. Izinja zasendle zizilwanyana zentlalo, zichitha lonke ixesha yazo ngokubambisana. Yenye yezona ndlela zihamba phambili kuzo zonke izilwanyana, kwaye ziya kuhlasela amaxhoba azo zonke ngobukhulu, ukusuka kwii-Elands ezinkulu ukuya kwiindawo ezincinci.
Indlela ehleliweyo yokuzingela ikwenza ukuba ihluthe ixhoba layo ngokukhawuleza, ngamanye amaxesha imizuzwana embalwa. Ixhoba liyondla, ngamanye amaxesha isaphila, kwaye inokutshatyalaliswa ngokupheleleyo kwimizuzu embalwa.
I-African Wild Dogs inokufumaneka kwiindawo eziqhelekileyo eziqinileyo kunye neentaba ezivulekileyo.
Imephu apho inja yasendle ifunyanwa khona ngokubanzi. Kuze kube kutshanje, uluhlu lweNjakazi yaseNtshonalanga luquka ininzi ye-Afrika engaphantsi kweSahara, ngaphandle kwemimandla yamanzi kunye neentlango.
Ngoku ke, nangona kunjalo, ziye ziphuhliswe kwiinkalo zabo ezininzi, ziphela kumazwe amaninzi aseNtshona nakwi-Afrika ephakathi, nakumpuma nakumaZantsi zivalelwe kwiindawo ezimbalwa apho ubuninzi bentlupheko yoluntu zihlala ziphantsi. Zifumaneka kwi-Kruger National Park eMzantsi Afrika, malunga nePalaborwa Gate, Tshokwane kunye neSkukuza kunye ne-Afsaal; Kunye nefama engavumelekanga.